Seera geysistooni ji’a March keessa dhukubani covid-19 wayta uumameti hoji dhabaan, hojidhan hafee | KWIT
Seera geysistooni ji’a March keessa dhukubani covid-19 wayta uumameti hoji dhabaan, hojidhan hafee
By Fatiya Adam • Jun 3, 2020
Seera geysistooni ji’a March keessa dhukubani covid-19 wayta uumameti hoji dhabaan, hojidhan hafee xumuuruuf umanni seera umaadhan har’a gara kutaa Iowa kaappitaala deebi’aniiru.
Hojiin guddaan hojii ekonomi gufatee kanarraati waan uumame bajata haala hin beekamne hiikuudha.
Warri filannoo adeemsisan kan magaala Woodbury akka himanitti filannoo Kibxata godhame 30% ture. Filannoo guduchaaf recordin kan qophaahu taha.
Senator mootummaa Randy Feenstra Reppabliika jalgaban irra caalee. Yeroo sagaliif injifachuu isaa Steve King qarqaarsa 45% harkaa kudhanii biraa tare jira.
Feenstra amma ammo Diimookraati J.D. scholten waalitti dhufa, Scholten King bara 2018 hinjifatee olee, filannoo dhumaati districti 4 ffaa dorgame.
Diimookraatiin Iowa kan Des Moines real estate executive akka taatu Theresa Greenfield U.S senater fi filatan, akka Joni Erns November keessa waldorgomtuuf.
Filannoo Woodbury county sharif godhameen police officer Sioux City duraani kan ture Chad Sheehan harka baaye Reppabliika hinjifateera. Yeroo ammaati mormitooni diimookraati hin jiran.
Sheehan akka jedhetti Seera eeydotaa fi ummatta komiinitti marayuu namoota gargaaruf ummata tokko gochuuf fi dhiiba guddaa kanna kan gochuu danda’u anna jedhee jira.
Manni fayyaa Sioux land magaala Woodbury keessatti namni tokko dabalatan sababa covid-19 du’uu, 2 ammo harawnii qabamu gabaasan. Magaala Dallas keessatti kan hundaa’e yaali laboratory argachudhaf turanii jiru.
Kuni sababaan ta’eef Lab Corp du’a Goerge Floyd irraa kan ka’e hirriira godhame irraa hojjattoota irratti dhiibaan akka argaa jiru hima.
Akkasumas manni fayyaa naanicha Test Iowa kan magaala Sioux City keessa jiruu dhabuu isani amma baay’ee akka isaan hin midhiin himan. Bakki amma baayeen qorannoon itti godhamu wal’aansaa naanawa jiru fi bakka qoranno hawaasa tti. Torbaan sadii keessatti Test Iowa kan sioux city keessaatti argamu qorannoo 800 gadi godhee.
Magaala Woodbury county keessatti nama 2,800 coronavirus qabame namni 37 du’e. Dakota county keessatti namni 6 dabalataan qabamuun manni fayyaa himan, waliigalati nama 1,700 gaheera, namni 26 ammo du’eera.
Manni barumsa South Sioux City barattoota bara haarawatif galmeesu jalqabaniiru. Yoo kan fedhii qabaatani bakka Welcome Center dhuftani ganama sa’ati 8 a.m. hangaa 3 p.m. galamayuu nii dandeetu.
Governor Iowa Kim Reynolds hiriira ilaalate gargaarsa dabalata osoo hin ajaajne dura bulchoota
By Fatiya Adam • Jun 2, 2020
Governor Iowa Kim Reynolds hiriira ilaalate gargaarsa dabalata osoo hin ajaajne dura bulchoota naannawa yaada isaani akka gaafatu himte. Turban darbee keesa eega poolisni Minneapolis keessati George Floyd ajjeesse booda umaani hiriira bahuudhan jijjiirama gaafata jiiru.
Sioux City keessatti halkan edaa downtown callisaa ture. Namnii tokkochiyuu hin hidhamnee, nama 200 oltuu kale gannamaa wajjiraa poolisii durataa hiriira bahee ture. Kaleesa bulchan magaala sioux city Mayor Bob akka sa’aati umaani allaa gallu ittu basuu yadee garuu hanga ammaati murti irra hin gene.
Jiraata Minneopolis Goerge Floyd erga poolisoni ajjeeste booda magaala Des Moines hiriiri nagaya
By Fatiya Adam • Jun 1, 2020
Jiraata Minneopolis Goerge Floyd erga poolisoni ajjeeste booda magaala Des Moines hiriiri nagaya guyyaa sadihiif akkuma itti fufe jira. Iowa governor Kim Reynolds akka jetteeti guraacha ameerika irratti rakkoo uumamu fudhane jira fi NAACP wajjiin hojachu jira jedhan. Akka oduu conference se’atti booda irratti GOv. Reynolds jetteeti akka ammaan booda duti akka hin argamneef ummata mirga namaa eeguufi seera fi haqa dalagu akka waliin dalagu feetu himte. Betty Adrews president branch NAACP kan Iowa fi Nebraska keessatti argamudha.
Manni fayyaa Iowa akka himeti namni coronavirus qabame bakka kampani fooni birraa keessatti akka
By Fatiya Adam • May 28, 2020
Manni fayyaa Iowa akka himeti namni coronavirus qabame bakka kampani fooni birraa keessatti akka guddan argaman himan, akkasumas magaala sanii namani du’e 500 gaheera.
Manni fayyaa Iowa akaa jedhetti hojjatoota kampani booyye Tyson kan Storm Lake keessatti argamu nama 2,500 goranoo godhamaan keessa hojattooni 555 coronavirus qabamu gabaasan.
Magaala Buena Vista keessatti namni covid-19 qabama olbay’atte guyyaa Kibxata 400 ol taa’u himan
By Fatiya Adam • May 27, 2020
Magaala Buena Vista keessatti namni covid-19 qabama olbay’atte guyyaa Kibxata 400 ol taa’u himan, lakkofsi kunis akka state lakkofsa guddaa ta’u dubatan.
Tyson hojjatoota isaa kan foon booye fi foon lukku kan storm Lake keessati argamu qorachaa jiraachu isaani himan.
Akka media Siouxland haasawa godhaniti kampanichi wayta qorannoon sute akka manna fayyaatti himan dubatan.